Tanzania Yevashanyi Vashandisi Vanodhira kunze Mamirioni zana nemakumi mashanu muHondo yeAnti-Poaching
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Tanzania Yevashanyi Vashandisi Vanodhira kunze Mamirioni zana nemakumi mashanu muHondo yeAnti-Poaching
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Tarisa Mharidzo neTanzania Yevashanyi Vanoshanda
Vatambi veTanzania Tourism vaturika mamirioni emadhora muchirongwa chakakura chekurwisa poaching chakagadzirirwa kuchengetedza nhaka yemhando yepamusoro yemhuka dzemuAfrica muSerengeti National Park.
Mapani makuru eSerengeti ane 1.5 miriyoni mahekita e savanna.
Iyo inochengetera yakakura kwazvo isina kuchinjika kutama kwemamiriyoni maviri emawori emombe pamwe nemazana ezviuru emhara nembizi.
Ivo vese vanoita rwendo rwedenderedzwa rwechiuru-makiromita-kureba kutenderera nyika mbiri dzepedyo dzeTanzania neKenya, zvichiteverwa nezvikara zvavo.
Pasi pechisungo cheTanzania Association of Tour Operators (TATO), vatengesi vezvekushanya vakamisa mamirioni zana nemakumi mashanu emadhora (US $ 150) kusimudzira chirongwa chekubvisa, vachiwedzeredza kuzvipira kwavo muhondo yeropa yekurwisa chinyararire asi chinouraya chinoitika chinoitika muSerengeti.
Permanent Secretary of Natural Resources and Tourism Ministry, Dr. Allan Kijazi, vanoti hurombo hwekuuraya humbavha hwave kuita zvishoma nezvishoma uye hunyanzvi hwekutengesa, zvichiisa paki yeSerengeti paki yenyika yeSerengeti. -ye gore stint yekureruka.
Iyi fomu yakakanganwika yekuuraya vanhu mhuka mu Serengeti yakurudzira vanoita zvekushanya kuti vapinde uye vagadzire chirongwa chekubvisa pakati paApril 2017, pasi pePublic-Private Partnership (PPP) modhi inosanganisira Tanzania National Parks (TANAPA) , Frankfurt Zoological Society (FZS), uye ivo pachavo.
Vachigamuchidza che150 miriyoni cheki kubva kuTATO kuenda kuFZS, ichiita chirongwa chekubvuta, Gurukota rezvezviwanikwa nekushanya, Dr.
“Ndiri kutenda TATO nemoyo wese nechirongwa ichi chinoshamisa chekutsigira chirongwa ichi chekurwisa humbavha. Kuenda uku kuchavimbisa kuchengetedzwa kwepaki yedu inokosha yenyika uye mhuka dzesango dzinokosha, ”akadaro Dr. Ndumbaro. Akavimbisa kuti achashanda akabatana neTATO mukusimudzira chirongwa chekuchengetedza pamwe nekuvandudza indasitiri yekushanya.
Sachigaro weTATO, VaWilbard Chambullo, vakati pamberi peCVID-19 denda rakatanga, vashanyi vekushanya vaimbozvipira kupa dhora rimwe chete ravakatambira kune mumwe mushanyi, asi nekuda kwemhepo yedenda, varimi vaifanira kuvhara zvivakwa zvavo nekutumira vashandi vavo vese kumusha.
Mukuedza kwayo kukuru kwekurarama, TATO, pasi peUnited Nations Development Program (UNDP) inotsigira zvivakwa zvehutano senge COVID-19 sampuli yekuunganidzira nzvimbo kuSeronera nekuKogatende kuSerengeti uko sangano rakaunza Sh40, 000 uye Sh20,000 fizi pamuenzaniso kubva kuTATO uye nhengo dzisiri dzeTATO zvichiteerana.
"Isu, muTATO, takabvumirana pamwe chete kuti tipe mari yatakatora kubva kunzvimbo idzi dzekuunganidza svutugadzike dzeCOVID-19 kusimudzira chirongwa chekubvisa," VaChambambullo vakatsanangura, pakati pekuombera kwaita vateereri.
Iyo feat, pakati pezvimwe zvinhu, yakave inogoneka, nekuda kwekudyidzana kwevatatu pakati peUNDP, TATO, pamwe nehurumende kuburikidza nebazi rezvezviwanikwa uye Tourism pamwe nebazi rezvehutano.
“Ndinofara zvikuru kuti mari yatiri kupa nhasi yechirongwa chekubvisa mari iyi iri pakati…… , mukusimudzira kudzoreredza kwekushanya muTanzania, ”akadaro CEO weTATO, VaSirili Akko.
Chirongwa cheDe-snaring, chekutanga cherudzi rwacho, chakaitwa neFZS - Sangano repasi rose rine mukurumbira rekuchengetedza rine makore anopfuura makumi matanhatu ezviitiko - rakagadzirirwa kubvisa misungo yakapararira yakagadzwa nevamamhi venyama venyama vemunharaunda kuti vabate mhuka dzakawanda mukati meSerengeti uye kupfuura.
Vachitaura, Mutungamiri weNyika weFrankfurt Zoological Society, Dr.Ezekiel Dembe, vakaratidza kutenda kune vanoita zvekushanya nekubatanidza pfungwa yekuchengetedza mune yavo bhizinesi modhi.
“Iyi itsika itsva kune vezvemabhizimisi vedu kuti vabatsire mukuchengetedza [chirongwa]. Chirevo chedu chemakore makumi matanhatu apfuura chave uye chichave chiripo, Serengeti haife, uye ndinodada kuti vashanyi vava kubatana nesu, ”Dr. Dembe vakapedzisa.
Kutanga pakati paApril 2017, chirongwa chekubvuta chakabudirira kubudirira kubvisa huwandu hwese hwemisungo yew 59,521, ichichengetedza mhuka dzesango 893 kusvika parinhasi.
Chidzidzo cheFZS chinoratidza kuti misungo yewaya ndiyo inokonzeresa kuuraya kwakawanda mhuka dzinokwana chiuru nemazana mashanu neshanu muSerengeti National Park munguva yaKubvumbi 1,515 kusvika Nyamavhuvhu 2017, 30.
Kungozvivharira kwekudya muSerengeti kwainge kwave kukuru uye kutengeserana, mureza wepaki wemu Africa wakawira pasi pekumanikidzwa kwekugadzirisa dambudziko mushure mekudzikama kwemakore maviri. Mhuka dzesango muSerengeti, nzvimbo yeNyika Yenyika.
Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI) yakaitisa "Great Elephant Census" mumatanho manomwe anokosha kubva muna Chivabvu kusvika Mbudzi 7 pakaonekwa kuti "mabara evapambi" akauraya 2014 muzana yeiyo nzou mumakore mashanu chete.
Muhuwandu chaihwo, mhedzisiro yekuverenga yakaonesa kuti nzou dzeTanzania dzakadzika kubva pa109,051 2009 muna43,521 kusvika pa2014 chete muna60, zvichimiririra kudzikira kweXNUMX muzana panguva iri kuongororwa.
Chikonzero chingangodaro chakakonzera kuderera uku kwakange kuri kuwedzera kukuru kwekuuraya vanhu munzvimbo mbiri dzakatarwa uye dzakavhurika, idzo Tanzania yanga ichinetseka kukwikwidzana nazvo mumakore apfuura kunyangwe zviwanikwa zvisina kukwana uye matekinoroji.
Senge izvo hazvina kukwana, izvo zvingangokanganikwa uye zvinyararire asi zvinouraya nyama yemusango poaching mukati meSerengeti Park yava kuisa nyama yemusango yepasirose pagore kumabvazuva kwemapani eEast Africa pasi penjodzi nyowani.